डोनाल्ड ट्रम्प र अमेरिकी ‘सफ्ट पावर’को गिरावट - BizKhabar Online
२०७४ फागुन २ (February 14, 2018) मा प्रकाशित
–जोसेफ एस. ने (रासस/प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
क्याम्ब्रिज । सबुत स्पष्ट छ । डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपति पदले अमेरिकी सफ्ट पावर कम भएको छ । ग्यालपद्वारा १ सय ३४ मुलुकमा हालै गरिएको मत सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत मानिस मात्र ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाको पक्षमा थिए । यो आँकडा बाराक ओबामाको राष्ट्रपतित्वकाल यता करिब २० अङ्कको गिरावट हो । प्यू रिसर्च सेन्टरले ३० प्रतिशत अनुमोदन रेटिङसँगै चीन करिब अमेरिकाको निकट पुगेको जनाएको छ । साथै बेलायती सूचकाङ्क ‘दि सफ्ट पावर ३०’ ले पनि अमेरिका सन् २०१६ मा पहिलो स्थानबाट चिप्लिएर गत वर्ष तेस्रो स्थानमा पुगेको देखाएको छ ।
ट्रम्पको प्रतिरक्षा गर्नेहरू सफ्ट पावरले कुनै फरक नपर्ने जवाफ दिन्छन् । ट्रम्पका बजेट निर्देशक मिक मुलभेनीले स्टेट डिपार्टमेन्ट र अन्तरराष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सीका लागि ३० प्रतिशतले बजेट कटौती गरेर ‘हार्ड पावर बजेट’ को घोषणा गरे । बाँकी विश्वले अमेरिकालाई दोस्रो स्थानमा रहेको मानेको बेला ‘अमेरिका पहिलो’ का प्रवद्र्धकहरूका लागि के तिनीहरू सही छन् ?
एउटा सरकारले घरमा (उदाहरणका लागि स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण गरेर), अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थामा (अन्य र बहुपक्षीयवादसँग परामर्श गरेर) र विदेश नीतिमा (विकास र मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गरेर) कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरा उसको उदाहरणीय कार्यको प्रभावले अरुलाई प्रभावित पार्नसक्छ । यी सबै क्षेत्रमा ट्रम्पले आकर्षक अमेरिकी नीतिहरूलाई उल्ट्याएका छन् ।
अमेरिकालाई अलोकप्रिय बनाउने इराक युद्ध सरकारको पहिलो नीति थिएन । सन् १९७० को दशकमा भियतनाममा अमेरिकी युद्धप्रति विश्वभरका कयौं मानिसले आपत्ति जनाएका थिए र अमेरिकाको विश्वव्यापी अडानले त्यो नीतिको अलोकप्रियकरणलाई प्रतिबिम्बित ग¥यो । जब नीति परिवर्तन भयो र युद्धका सम्झना कम हुँदै गर्याे अमेरिकाले उसको हराएको सफ्ट पावर बहुत अधिक पुनःप्राप्त गर्याे । त्यसै गरेर इराक युद्धपछि विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा अमेरिका उसको सफ्ट पावर हासिल गर्न सफल रह्यो । यद्यपि मध्यपूर्वमा त्यति धेरै हासिल भएन ।
(जोसेफ एस. ने अमेरिकी पूर्व रक्षामन्त्री हुन् । उनी हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर समेत हुन् ।)